Akara Cavendish | October 2021
Isi > Akara Cavendish
akara ugogbe anya maka anwụ
Mark ugogbe anya maka anwụ - otu esi emezu
Kedu iko ndị Mark Cavendish na-eyi? Mark Cavendish Iyi Oakley Jawbreaker Ugogbe anya maka anwụ. Mark Cavendish bụ onye Britain ọkachamara na-agba ịnyịnya ígwè.
akara mmerụ ahụ
Mark cavendish mmerụ - ajụjụ nkịtị
Kedu ihe mere Mark Cavendish? Cavendish kụrụ na Peter Sagan na nke anọ nke 2017 Tour de France, na-amanye ya n'ọsọ ahụ. Cavendish gara n'ihu na-arụpụta ezigbo nsonaazụ ruo Ọgọstụ 2018, mgbe a chọpụtara na ọ na-arịa EpsteinBarr virus.
akara igwe eletrik
Mark cavendish igwe - achọta ihe ngwọta
Kedu igwe kwụ otu ebe Mark Cavendish na-agba? Pụrụ iche Tarmac S-Ọrụ SL7
akara akara ndahie
Mark cavendish sprints - otu esi edozi
Kedu ọsọ ọsọ Mark Cavendish Sprint? 70.2km / awa
akara ndi otu
Kpọọ otu ndị otu - ihe ngwọta na-adịgide adịgide
Cavendish ka na Tour de France 2021? Mark Cavendish na-adịgide ndụ oge oge mgbe Luke Rowe kpochapụrụ na nke iri na otu nke 11 nke Tour de France 2021. Mark Cavendish anwụghị oge egbutu na ogbo 11 nke Tour de France 2021, mana Luke Rowe emechaghị na oge.2
akara mkpọchi mkpọtụ
Mark cavendish mkpọka - otu esi enweta ya
Kedu ihe kpatara eji daa Mark Cavendish? Mark Cavendish nwere mmeri nke isii nke Tour de France ka ndị na-ahazi tụpụrụ ikpe megide onye kpatara ọgba aghara dị egwu. Oghere iji kpọọ ma ọ bụ kwusi, M ka ogbi, akụ aka ekpe na aka nri ịchọ, na akụ ala maka olu.01.07.2021
Cavendish Sprint - otu esi emeso
Cavendish ka na Tour de France 2021? Mark Cavendish meriri ọzọ na ogbo 13 nke Tour de France 2021 mgbe ọ rụchara ọhụụ ọzọ. 16
akara akara kachasị mma
Akara oke ọsọ ọsọ - Ntuziaka zuru ezu
Kedu ọsọ ọsọ nke onye na-agba ịnyịnya ígwè ọkachamara? Tour de France 2019 na ọnụ ọgụgụ | Nwere ike ịkọ ọsọ ọsọ e dekọrọ ngwa ngwa? Oke edere edere: 101.5kph (63.1mph) Nkezi ọsọ ọsọ: 20.6kph (12.8mph) Onu ogugu nke ndi mmeri meriri: 0.30. 2019.
Olimpik nke ndagwurugwu
Cavendish olympics - azịza dị mfe maka ajụjụ
Ndi Tour de France nwere Cavendish na 2020? Mark Cavendish alọghachi na Tour de France. N'iburu mgba ndị ọ gabigara n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ọ bụ nnukwu ihe ọ rụpụtara - na nke ọ dị ka ọ dịka nwatakịrị nwoke si na Isle nke mmadụ na-emeri usoro 30 nke agbụrụ kachasị. 26. 2021.
akara mmelite mmerụ ahụ
Mara mmelite mmerụ ahụ - ihe ngwọta bara uru
Kedu ihe Mark Cavendish na-eme ugbu a?
cavendish igwe kwụ otu ebe
Cavendish bike - ajụjụ nkịtị
Cavendish ka nọ na njem ahụ? Mark Cavendish anwụghị oge a gbasoro oge 11 na Tour de France 2021, mana Luke Rowe emechaghị na oge. 3
kaa akara ọsọ ọsọ ọsọ
Mark cavendish Sprint ọsọ - Akwụkwọ ntuziaka zuru ezu
Kedu otu ọsọ ọsọ ga-esi agba Spọ ịgba ọsọ? Ogologo ọsọ ọsọ n'oge ịgba ọsọ ụzọ ọkachamara bụ 63.9kph (53.7-69.1kph) kwadoro n'etiti 9 na 17 sekọnd maka ụmụ nwoke, na 53.8kph (41.6-64kph) maka 10-30 sekọnd maka ụmụ nwanyị.
akara akara uhie
Mark cavendish oakleys - usoro ohuru
Kedu iko ndị Mark Cavendish na-eyi? Mark Cavendish yi Oakley Jawbreaker Ugogbe anya maka anwụ. Mark Cavendish bụ onye Britain ọkachamara na-agba ịnyịnya ígwè.